7Monkeys: September 2006
4 comments |	Saturday, September 30, 2006
ကျွန်တော် နှစ်သက်တဲ့ ကဗျာလေး တစ်ပုဒ်ပါ။ ဗမာပြည်တွင်မွေး၍ ဗမာနိုင်ငံအကြောင်း စိတ်ဝင်စားသူတိုင်း သိသော ကဗျာတစ်ပုဒ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ နောင် မျိုးဆက် ဗမာလူငယ်တိုင်းလည်း သိကိုသိရမည့် သမိုင်းနှင့်ဆိုင်သော ကဗျာတစ်ပုဒ်ဖြစ်သောကြောင့် အမှတ်တရ အနေနဲ့ကျွန်တော် ပြန်တင်ထားပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်၏ သွေး မနီသေးလျှင်
အသင်တို့ သွေး ပက်ဖျန်းပေး၍
သင်တို့ ဝိညာဉ် ပူးကပ်ဝင်၍
အသင်တို့ ၏ မညွတ်ပြောင်းသော
ကျွန်ုပ်အသက် လမ်းတဝက်မှ ပေးဆပ်ရလည်း
လူ့ ဘုံလမ်းခွဲ ဝမ်းမနည်းပဲ
သင်တို့ ရှိရာ ကျွန်ုပ်လာမည်
ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ အဖွဲချုပ်
4 comments |	Thursday, September 28, 2006
အေးစက်စက် အထိအတွေ့ကြောင့် အသိစိတ်က ပြန်ပြီး နိုးထလာသည်။ ကရောင်ခြောက်ခြားနှင့် နာရီကို လှမ်းကြည့်မိတော့ လက်တံက ၅ နာရီ ၃၀မိနစ် နီးနီးထိ ခရီးပေါက်နေ၏။ သို့နှင့်ပင် ပြတင်းပေါက်မှ မှောင်ပြပြ အလင်းရောင်ကို ကြည့်၍ ဒါ ညနေ ၅ နာရီခွဲ ပင်ြဖစ်သည်ဟု စိတ်ကဇဝေဇဝါနှင့် မှတ်ယူလိုက် အပြီး.. အူကြောင်ကြောင် မေးခွန်းတခုက ကန့်လန့်ဖြတ် လိုက်ပါလာသည်။ ငါဘယ်ရောက် နေတာဘာလိမ့်။ မသေချာ မရေရာခြင်းများ နှင့်အတူ.. ဒါရန်ကုန်လား၊ ကျနော် နေထိုင်အခြေချ၊ ပြီးဖြစ်နေတဲ့ ရေခြား မြေခြားက မြို.ကြီး တမြို.လား၊ ဒါမှ မဟုတ်ရင် ကျနော့်ရဲ့ မြို.လေးလား၊ နောက်ဆုံး မေးခွန်းကို မေးအပြီးမှာ ကျနော် အတော့်ကို စိတ်လှုပ်ရှားသွားသည်။ အမှန်အတိုင်း ဝန်ခံရလျှင်ဖြင့် ဒီလိုအူကြောင်ကြား ကိစ္စမျိုးတွေ ဖြစ်လေ့ရှိသည်မှာ မဆန်းလှတော့။
တကယ့်ကိုပင် အခိုက်အတန့်ကာလ တခုထိ ကိုယ်လက်ရှိ နေထိုင်ရာဒေသ တခုကို မှတ်မိနိုင်စွမ်း မရှိလောက်အောင် စွမ်းအားထုထည်ကြီးမားလှသည့် အိပ်မက်တမျိုး မက်ပြီး နိုးထလာတိုင်းပေါ့။ ကျနော်ကလည်း ကျနော်၊ ဒီမြို.လေးနဲ့ ပတ်သတ်လာလျှင် သိပ်ပြီးSensitive ဖြစ်လွန်းအားကြီးလှသည်။ ဘေးဘီဝဲယာကို သေချာဂရုစိုက် ကြည့်မိချိန်တွင် ၊ပြတင်းပေါက် မှ တပိုင်းတစ ဝင်လာသော နေဝင်ရီတရော အလင်းရောင်က ပြန့်ကျဲနေသော စာအုပ်နှင့် စာရွက်များ၊ မီးပူ မတိုက်ရသေးသော အဝတ် ဖိုးရိုဖားရားများကို ပြီတီတီနှင့် လှစ်ပြနေသည်။ အေးစိမ့်စိမ့် ဆောင်းဝင်ချင်စ လေကလည်း ပြတင်းနှစ်ခုလုံး မှ ဘယ်သူမ ဂရုမစိုက်တဲ့ လုရမ်းကား တယောက်လို ကျနော့် အရေပြားကိုလာရောက် ရိုက်ခတ်သည်။
ဩော်... အင်း. ဒါဆိုသေချာပါပြီ.. ဒါရန်ကုန် မဟုတ်ဘူးလေ၊ ကျနော့်ရဲ့ မြို.လေးလည်း မဟုတ်ဘူး။ တယောက်တည်းပေမည့် ခတ်တိုးတိုးသာ ကျိန်ဆဲ လိုက်မိသည်။ အိပ်မက်ထဲက မြို့လေးကို သိပ်နှမျောနေမိတာကိုး။ အရင်က အကြိမ်ပေါင်း ထောင်သောင်းလို ဘဲ အိမ်မက်ထဲတွင် ကျနော့် မြို.လေး၏ ပုံရိပ် ကတိကျ ပြတ်သား လွန်းနေသည်လေ။ ဒါတွင်မက.. ရေငွေ့များတဲ့ လေထု၊ ရနံ့၊ နောက်ဆုံး ကုန်ကုန် ပြောရရင် သစ်ရွက်တို့ ရဲ့ စိမ်းလမ်းပုံ အရောင်အသွေး ကအစ အသေးစိတ် တူညီလွန်းလှသည်။ တခါတရံ ကျနော့် ဝိငြာဉ်သို့ မဟုတ် မသိစိတ်သည် အိပ်ပျော် နေစဉ်အတွင်း၊ မိုင်သောင်းချီ ဝေးသော ကျနော့် ဇာတိ မြို.ကလေးသို့ ခရီးများနှင်နေသလားဟု ဂမ္ဘီရဝတ္ထု ဆန်ဆန် စဉ်းစားမိသေး၏။
အိပ်မက်ထဲတွင်တော့ ကျနော် လမ်းလျှောက်နေသည်။ အိမ်ရှေ့ တွင်ကျနော် လမ်းလျှောက် နေသည်။ ၁၀တန်း ကျောင်းသားဘဝက နောက်ဆုံးစီိးထားသော ကတ္တီပါဖိနပ် အသစ်လေးစီးပြီး အိမ်ရှေံ တွင် ကျနော် လမ်းလျှောက်နေသည်။ မင်းကုသ၏ မျက်နှာနှင့် ဆင်ဆင်တူသည်ဟု ယူဆရသော.. ချိုင့်ခွက်အပေါင်းနှင့် ကတ္တရာ လမ်းဟောင်းလေးပေါ်တွင် ကျနော် လမ်းလျှောက်နေသည်။ ထုံးစံအတိုင်း လူတစ်ဦးမှမရှိ။ တပြိုင်တည်းမှာပင် ရောက်တုန်း ရောက်ခိုက်ဘာအရင်လုပ်ရင် ကောင်းမလဲဟုအကြံလည်း ထုတ်နေမိသည်။ ခပ်လှမ်းလှမ်း ဆိပ်ကမ်းမှ သင်းဘောတစီး၏ ဆွဲဆွဲငင်ငင် ဥဩဆွဲသံနှင့် အတူ အတော်အသင့် ပြင်းသော လေကလေး တစ်ချက်ကလည်း ဖြတ်တိုက်အသွား.... ခြံနောက်ဖေး၊ ဘေးအိမ်များတွင် စီတန်း စိုက်ပျိုးထားသော အုန်းပင်များမှ အုန်းလက်များ တရှဲရှဲမြည်အောင် လှုပ်ခတ်သွားပုံကို ကျနော် ကျေကျေ နပ်နပ် ပြုံးပြီး ကြည့်နေမိသည်။ ဘာရယ်ကြောင့်တော့ မသိ။ မြို.လေးကို အိပ်မက်တိုင်း အုန်းပင်တွေ ယိမ်းထိုးပုံ မပါလျှင် မပြည့်ဆုံ သကဲ့သို့ ဖြစ်နေသည်။
ဟုတ်တယ် လေသင်းနံ့၊ ဒီ လေသင်းနံ့ပေါ့.. ကျနော် ၁၆ နှစ်နီးပါး နေစဉ် ရှုရှိုက်လာတဲ့ လေ၊ ငဝန်မြစ်ကို ဖြတ်ပြီး ရောက်လာတဲ့ လေ၊ နုပျို လတ်ဆပ်ခြင်းတွေ သယ်ဆောင်လာတဲ့ လေ၊ ဒီလို လေသင်းနံ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ဒီတစ်မြို့ ပဲရှိတယ်။
ဒီလိုနှင့် ကျနော် လမ်းဆက်လျှောက်လာရင်း လမ်းထောင့်မှ စာအုပ်ဆိုင်အိုလေး ဘက်သို့ ခြေဦး လှည့်မိသည်။ ကျနော် စာစဖတ်တတ်သည့် အရွယ်မှစ၍ ၁၆နှစ်သားခန့် အထိ၊ ..ကျောင်းဖတ်စာ၊ ဗလာစာအုပ်မှ စပြီး ရွေသွေး၊ တေဇ၊ သရီးဒီဂျာနယ်၊ တံခွန်နှင့်အင်အားတို့လို ခေတ်ဦး အားကစား ဂျာနယ်များ အထိ ဝယ်ယူခဲ့ဘူးသည်။ ဆိုင်နံမည် ရှိသော်ငြားလည်း ဆိုင်ရှင် အဖိုးကြီး၊ အဖွားကြီး လင်မယားအား အစွဲပြု၍ ကျနော်နှင့် ဘော်ဒါတသိုက်က အဘိုးကြီးအဘွားကြီးဆိုင်ဟုသာ ခေါ်ကျလေသည်။ ယနေ့လက်ရှိတွင် သူတို့နှစ်ဦးလုံး သက်ရှိထင်ရှား ရှိမရှိ မသေချာ လှသော်လည်း အိပ်မက်ထဲတွင်တော့ ဝမ်းသာအားရ နှုတ်ဆက်ရှာသည်။ ဆိုင်လေးရော သူတို့နှစ်ဦးလုံးပါ လွန်ခဲ့သော ၇နှစ်ခန့်ကအတိုင်း ဖြစ်သည်။
ထိုနောက်တွင်တော့ ရေချိုးရန် အိမ်သို့ ခပ်သွက်သွက် ပြန်လာခဲ့မိသည်။ သံဇကာကွက် အိမ်ရှေ့တံခါးအား အသာလေး ဆွဲမ၍ အိမ်တွင်းသို့ ဝင်လိုက်၏။ အိမ်တွင်းရှိ မှောင်ပျပျ အလင်းရောင် အောက်တွင် ကျနော်မှ လွဲ၍ မည်သူမှ ရှိမနေပါ။ အဖေ့ ဆေးကုခန်း၊ အဖေ့ အလုပ်စားပွဲ၊ အိပ်ခန်းငယ်များကို ဖြတ်သန်းပြီး ရေချိုခန်း ရှိရာသို့ ရောက်ရှိ လာခဲ့သည်။ ထိုစဉ်မည်သို့ မျှ မျှော်လင့်မထားသော ပစ္စည်းဟောင်းလေး တခုက ကျနော့်ကို မှင်သက်သွားစေ မိသည်။ ဖုံအလိမ်းလိမ်း နှင့်မွဲခြောက်ခြောက် လိမ္မော်ရောင်ခြင်း တောင်းအိုလေးတစ်လုံး။ မူလတန်းနှင့် အလယ်တန်း ကျောင်းသားဘဝ တစ်လျှောက်လုံး.. အမေ ထည့်ပေးသည့် ထမင်းဘူး၊ ရေဘူးရယ်၊ လက်သုတ်ပဝါလေး တထည်ရယ်၊ ဒီတောင်းလေးထဲ ထဲ့ ပြီး ကျောင်းတက်ခဲ့ တာပေါ့။ အထက်တန်း အရောက်တွင်တော့ စုတ်ချာလာပြီး အမေက အသစ်ဝယ်ပေး တော့သည်။ ယနေ့ထိ ကာလတစ်လျှောက်လုံး အစွဲအလမ်း မကြီးလှသူဟု ကိုယ့်ကိုကိုယ် အထင်ကြီးခဲ့သမျှ ယခု ဤတောင်းစုတ်ကလေး နှင့် အိပ်မက်ထဲတွင် ပြန်တွေ့မှ မည်မျှ အစွဲအလမ်းကြီးကြောင်း သတိထားမိတော့သည်။ တောင်းလေးအား ပွတ်သပ်ကြည့်လိုက် မိ၏။ ပွန်းနေသော ပလတ်စတစ် သားများမှ ရှတတ အထိအတွေ့ကို လက်က ထင်ထင်ရှားရှားပင် ခံစားမိသည်။ အိပ်မက်ထဲမှ ကျနော် အိပ်မက်မက်နေမှန်း တပြားသားမျှ ရိပ်မိပုံမပေါ်။
သို့နှင့် သုံးထပ်သားများ ကာရန်ထားသော ကျနော့် ကိုယ်ပိုင် အခန်းလေးအတွင်းသို့ ချိုးအဝင်လိုက်တွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ ဝေးကွာနေပြီးသော ငယ်သူငယ်ချင်း တဦးကို ဘွားကနဲ တွေ့လိုက်ရသည်။ သူကတော့ အံ့ဩဟန်မပြ၊ ဂရုလည်း မစိုက်ဘဲ ကျနော့် အိပ်ယာပေါ်တွင် လှဲလျောင်းကာ လက်ကိုင် တီဗီဂိမ်းလေးအား သဲကြီးမဲကြီး ကစားနေသည်။ အခန်းထဲတွင် တီဗီဂိမ်းလေးမှ တတီတီမြည်သံ အပြင် မှော်ရုံတောသို့ မတော်တဆရောက်ရှိ သွားသည့် သာမာန်လူတဦး၏ အံ့ဩဝမ်းသာ ထိတ်လန့်ခြင်းမျိုး ကျနော့်ကိုယ်တွင်းမှ ဖိတ်စင်ကျ နေသည်။ သူ့ပုံကို ကြည့်ရတာ လွန်ခဲ့တဲ့၇နှစ်၈နှစ်လောက်တုန်းက အတိုင်ဘဲ ပိန်ကပ်ကပ်။ ကျနော်က ပြာပြာသလဲ ဟေ့ကောင် မင်းမိန်းမရပြီး တောင်ဒဂုံမှာနေတယ်ဆို။ သူက ငယ်ငယ်က အကျင့်အတိုင်း ပြုံးစိစိနဲ့ ဘာမှ ပြန်မပြောဘဲ၊ မင်းစက်ဘီး ထုတ်လိုက်လေ.. ငါတို့ ကော်ရည် သွားသောက်ကြ ရအောင်။ ဟာ.. ဟုတ်ပ ခုမှသတိရ မိတယ်။ ကျနော်မြို.လေး၏ အထူးစပယ်ရှယ် အစားအသောက်မှာ မုန့်ဟင်းခါးနှင့် ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲ ဖြစ်သည်။ မုန့်ဟင်းခါး နာမည်ကြီးပုံ ကတော့ လူတိုင်းနီးပါး သိပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော် ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲ အကြောင်းတော့ အတော် လူ သိနည်း လေသည်။ ရန်ကုန်ကော်ရည် နှင့် မတူ၊ အရည်ကြဲကြဲ၊ ညှပ်ခေါက်ဆွဲ (ဒေသအခေါ် ဆန်ခေါက်ဆွဲ) ထည့်စားလေ့ရှိသည်။ ကန်စွန်းရွက်နှင့်ငပိတောင်းတို့ လုံးလုံး အသုံးမပြု။ ယခင် ချာတိတ်ဘဝတုန်း ကတော့ အဲဒီ သူငယ်ချင်းရယ် တခြား သူငယ်ချင်းများ အုပ်လိုက်နဲ့ စက်ဘီးတွေ စီးပြီး ကော်ရည်ဆိုင် သွားကြပုံကို သတိရမိ၍ ဟေ့ကောင် အရင်တုန်းက အတိုင်းဘဲလား ဟုအရင်းမရှိ အဖြားမရှိ မေးလိုက်မိ၏။ သူကလည်း ကျနော့် စိတ်ထဲကို မြင်ရသည့် အတိုင်း အင်း ဟု... တုံးတိတိနှင့် ပြန်ဖြေ သည်။
ထိုအချိန်တွင်... ထိုအချိန် အရောက်တွင် အေးစက်စက် ခြောက်ကပ်ကပ်နိုင်လှသော.. တောင်ပိုင်းကယ်လီဖိုးယား၏ မိစ္ဆာ သဲကန္တာရ လေမျိုးသည် ကျနော့်နှင့် ကျနော့်မြို့ကလေးအား ရက်စက်စွာ ဖြတ်တောက် လိုက်လေ တော့သည်။
ဖြတ်သွား ဖြတ်လာ နည်းပါးလှသော ကျနော့် အိမ်ရှေ့ လမ်းကလေးသည် ယခုအခါ အိမ်ဘေးတွင် အသစ်တည်ဆောက်ထားသော တည်းခိုခန်း၊ ကာရာအိုကေခန်း၊ ဘောလုံးပွဲရုံ တို့နှင့် အတူ သက်ဝင် လှုပ်ရှားနေသည် ဟု ကြားသိ ရသည်။
အိပ်မက်ထဲမှ သူငယ်ချင်းမှာ အမှန်တကယ် အိမ်ထောင်ကျသွားသည်ဟု ဆိုကြပြီး ယနေ့အထိ ပြန်မတွေ့ရတော့ချေ။
ကျနော့်မြို့ လေးမှ ယနေ့ ချာတိတ်များသည် အုပ်စုဖွဲ့ ဆိုင်ကယ်များစီးပြီး ကြေးအိုးနှင့် ဘီယာဆိုင်များသို့ သွာသည်ဟု ပြောကြသည်။
ဧရာဝတီတိုင်း၏ မြို့ တော် အားမြို့ လေးဟုခေါ်ဆိုနေခြင်းကို သူငယ်ချင်းများ ကန့်ကွက်ကြသော် လည်းကျနော်ကတော့ ဆက်ခေါ်မြဲ ဖြစ်သည်။ ကျနော့် အတွက်တော့ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်မှ တောဆန်ဆန် မြို.လေး တစ်မြို့ သည်... မွေးဖွားကြီးပြင်းရာ မြို.လေးတစ် မြို့ သာ ဖြစ်ပေသည်။
And army worms
And the coiled intestines
Shall find may
In the invalid home
With collar’d fathers
At bedside mass
On palatable meal
And for the grave majesties
The maize cob
Forarusty funeral feast.
I kick,my toe mutilates
on dry strump
I've searched the exit
no wrecks of ships
by Jared Angira(KENYA)
အချိန်ရလို့ ပိုက်ဆံလည်းရှိရင် ဒီစာအုပ်ဖတ်ကြည့်ပါလား။ ငါ Chomsky နဲ့ ဝေးဝေးနေခဲ့တာ ၈ လ လောက်ရှိပြီ။ ခုတော့ ပြန်ဖတ်မယ်စိတ်ကူးတယ်။ UN မှာ Venezuela ခေါင်းဆောင် Hugo Chavez က အဲဒီစာအုပ်ကြီး ကိုင်ပြီး စကားပြောသွားတာ ဒီမှာတော့ အရောင်းရဆုံး စာရင်းထဲ အဲဒီစာအုပ်ပါသွားတယ်။နာမည်က Hegemony or Survival ပေါ့။ ငါကတော့ ပိုက်ဆံမရှိသေးလို့ကော်ဖီဆိုင်သွားဖတ်မယ်စိတ်ကူးတယ်။
I have listened BBC Burmese Programme just now. I got up to write this in the middle of night. One of 88 Student leaders told to BBC Burmese Programme that the Military Intelligent asked them to come along with about 15 minutes in 1988 and they were allowed to go home only after 15 years later. So, I am wondering how long SPDC will keep this time since the authority didn’t say how long it was goanna be when they picked up three students leaders this morning. I wish they will be back to home as soon as possible.
1 comments |	Wednesday, September 27, 2006
ဖားမျိူးစုံနဲ့ကြပ်ပျံမကျစည်ကားနေတယ်
အမျှားခံနေရတဲ့ ငါးလေးတွေလည်း ဗုံးဘောလအောရှိတယ်
ကျားတွေ ခြင်္သေ့တွေ တဖြည်းဖြည်း မျိူးတုံးကုန်ပြီ
အရိပ်အာဝါသ သစ်ပင်ကြီးတွေ တဖြည်းဖြည်ွး မျိူးတုံးကုန်ပြီ
ဇီးကွက်တချိူ့လည်း မစိုစလောက်ဘဲ ကျန်တော့တယ်
ဒေါင်းတွေလည်း မစိုစလောက်ဘဲ ကျန်တော့တယ်
ရာသီဥတုဆိုရင်လည်း မိုးခါးမိုးတွေ ဒလဟောရွာလို့ 
ဆန်းသစ်တဲ့ နေ့ ရက်တွေပါတယ်
သူက အရိပ်တွေ ခြွေလိုက်တိုင်း
ဒါနဲ့ ငါဟာ အရိပ်ခြွေသစ်ပင်ဆီ သွားကာ
သူ့ တစ်ကိုယ်လုံးမှာ ကြီးပေါင်းတက်ဒဏ်ရာတွေ
မနေ့ ညက မိုးအေးအေးနဲ့အိမ်ရှင်းရင်းပြန်တွေ့ ခဲ့တဲ့ မောင်ချောနွယ်ရဲ့ မောင်ချောနွယ်ဆန်သွားသောနေ့ များ ကဗျာစာအုပ်ဖတ်ပြီး အင်မတန်ဇိမ်ကျ ခဲ့တာပေါ့။ မနက်မိုးလင်းလို့ပြန်တွေးကြည့်တော့မှ ဩော်… ဘဝ တစ်ခုလုံး သူ့ ရင်ဘက်ကြီးနဲ့ ထွန်ယက်ခဲ့တဲ့ ကဗျာသစ်သီးတွေကို ကျွန်တော့်မှာ ကျပ်၃၀၀ ပေးဝယ်ပြီး အမြိုက်သား ဇိမ်နဲ့ စားနိုင်ဘာလားဆိုပြီးတော့ စိတ်ထဲမကောင်းဘူး။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်လေ မနေ့ ညကတော့ ကျွန်တော်လည်း ပီပီပြင်ပြင် ကြီးကို မောင်ချောနွယ်ဆန်ပြစ်လိုက်တယ်။ကဗျာနတ်သားကြီး မောင်ချောနွယ် ရေ နတ်ပြည်မှာ နတ်သားနတ်သမီး တွေအတွက် နတ်ကဗျာတွေ ဆက်လက် ဝေမျှ နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းတယ်ဗျာ။
မိုးမိုးရေ….. ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကဗျာမရေးနိုင်တော့ မောင်ချောနွယ်ရဲ့အရိပ်ခြွေသစ်ပင်
ကဗျာနဲ့ခင်ဗျားရဲ့ အပတ်စဉ်ကဗျာအစီအစဉ်အတွက်ပို့ စ် တင်လိုက်တယ်ဗျာ။ကျွန်တော်
တို့ ချစ်သောမောင်ချောနွယ် အလွမ်းပြေသဘောမျိူးပေါ့။ ပြီးတော့ အရိပ်တွေခြွေချပေးနေတဲ့ သစ်ပင်တွေအတွက်လည်း ရည်ရွယ်ပါတယ်။ လူလည်ကျတယ်လို့တော့ မပြောနဲ့ နော့်။
အိပ်မက် မှာတင်ထားပေးလို့ ဖတ်ရတာပါ။ အတော့်ကို ထိထိမိမိရှိလွန်းလို့ ။ အဲဒီကာတွန်းတွေလည်း ဖတ်ပြီးရော ကျွန်တော့်မှာ အားခြင်း အော်ပီကျယ် ၊ စောမင်းဝေ ကာတွန်း တွေဖတ်ခြင်တဲ့ အာသီသပြင်းလာလိုက်တာ မနေနေ ကို ဝဘ်ဆိုဒ်လင့်ခ် ပေးဖို့ အပူကပ်ရတယ်။ သူ့ ဆီက တော်တော်လေးရလိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် အော်ပီကျယ့် ကာတွန်း စုံစုံလင်လင် ဖတ်လို့ ရမဘူး။ အလုပ်ကအပြန်တော့ မြန်မာစာအုပ်ဆိုင် မှာ ဝင်ရှာဝယ်ရမှာဘဲ။
ကျွန်တော့် ကဗျာတော့ မဟုတ်ဘူး။ ကြိုက်လို့ တင်တာ။ ခွင့်တော့မတောင်းမိဘူး။ သူစိတ်မဆိုးအောင် ဒီကနေ ကြော်ငြာပေးလိုက်မယ်။ ဟဲ ဟဲ။ လည်တယ်နော်။ အဲဒီလူရေးထားတာတွေ တော်တော်များများ ရီရတယ်။ ဥပမာ ကြေမွသွားသော ဘဲဥတစ်လုံးအကြောင်း ဆိုတဲ့ ဟာသဇာတ်လမ်းတိုလေးလိုမျိူးပေါ့။ အရေးအသားဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်။ ကဲ ကိုယ့်ဆရာ ရေ ဒါလောက် ဆို စိတ်ဆိုးတော့်ဝူး လို့ ယူဆတယ်နော့်။
တစ်ကယ့်ကို ရင်ဘတ်ထဲမျိုသိပ် မထားနိုင်လွန်းလို့ ထွက်ကျလာတဲ့ ခံစားချက်တွေပါ...
လျှက်ဆားပုလင်းတော့ ဆောင်ထားကွဲ့။ ။
BYAKGA - ဗြ ဂ္ဃ
3 comments |	Monday, September 25, 2006
ဟား ဟား ဟား ရီရတာ အူကိုလိမ့်တယ်။ ဟေး လျှောက်တော့ မတွေးနဲ့ နော်။ ရူးသွားမှာစိုးလို့ ။
သီချင်းရောနားထောင်ချင်လား။ Pixies's Monkey Gone To Heaven တဲ့ ။ ဒီနေရာကို ကလှစ်နှိပ်၍ ရယူပါ။ ဘိုးတော်ကြီးရေ မင်းစကားလုံး ခွင့်မတောင်းဘဲ သုံးပြီကွာ။ ကြိုက်လို့ ။ ဟီး ဟီး။
Iraq For Sale,OutFoxed ,မြန်မာ့မီဒီယာ ၊ လွတ်လပ်စွာပြောဆိုရေးသားခွင့်
Iraq For Sale က အမေရိကန်ဒုသမ္မတ Chiney ရှယ်ယာအများစုပိုင်တဲ့ Halliburton Company ရဲ့ အရှုပ်တော်ပုံကို ဖွင့်ချထားတဲ့ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကျွန်တော့် ဆီမှာ မရှိတဲ့ အတွက် အကုန်မကြည့်ရသေးပါ။ အမြည်းကိုတော့Youtubeမှာ iraqforsale.orgကနေပြီးတော့ တင်ပေးထားပါတယ်။ နောက်တကားကတော့ အမေရိကန် မီဒီယာတိုင်ကွန်း Rupert Murdoch's Fox Channel ကနေတဆင့် အီရတ်စစ်ဆင်ရေးအတွက် ဝါဒဖြန့် မှုကို ကမ္ဘာသိအောင် ဖော်ထုတ်ထားတဲ့ Outfoxedမှတ်တမ်းကားပါ ။ လွတ်လပ်တဲ့ ဒီမိုကရေစီဆိုတာ ဒါပါဘဲ။ အုပ်ချူပ်သူ အစိုးရက ပြည်သူတွေကို ညာခြင်တိုင်းညာလို့ မရပါ။ အစိုးရ သည် အခွန်ထမ်း ပြည်သူတွေရဲ့ ဆန်ကို စားနေရတာပါ။ ပြည်သူ တွေရဲ့ ငွေ၊ အခွင့်အာဏာ၊ ယုံကြည်မှုကို အလွဲသုံးစား လုပ်ရင် သူတို့ ဆီကမီဒီယာတွေက လက်ပိုက်ရပ်ကြည့်မနေပါဘူး။ အားလုံးကိုမချွင်းမချန်ဖော်ထုတ်ပစ်တာဘဲ။ကျွန်တော်တို့ ဆီမှာလဲ အဲဒီလို ပြည်သူ့ စာနယ်ဇင်းသမားတွေ အများ ကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။ ဆရာကြီးရွှေဥဒေါင်း ဂျာနယ်ကျော်ဦးချစ်မောင်နဲ့ဂျာနယ်ကျော်မမလေး၊ လူထုဒေါ်အမာ၊ လူထုဦးစိန်ဝင်း၊ ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင်(ကျွန်တော့်အသိတော်တော်များကတော့ ဂျာနယ်ကျော်ဦးချစ်မောင် နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြောဆိုကြပါတယ်) ။ အများကြီးမှအများကြီးပါ။ သူတို့ ရေးတဲ့စာတွေ အားလုံး(သို့ မဟုတ်)တော်တော်များများ ကို ကျွန်တော်မဖတ်ဖူးပါ။ ဒါပေမယ့် ဖတ်မိသလောက်နဲ့ တင် သူတို့ ကို အရမ်းလေးစားမိတယ်။ အဲဒါနဲ့ တပြိုင်ထဲ လွတ်လပ်ရေး နှောင်းပိုင်းခေတ် သတင်းစာနဲ့ မီဒီယာလောကကို အားကျစိတ် ၊ တပ်မက်စိတ်တွေက ဖတ်မိတဲ့ အချိန်တိုင်း တဖွားဖွားပေါ်နေတော့တာဘဲ။ စိတ်တော့လဲ သိပ်မလျှော့ပါဘူး။ ဒီိ်ိ်ိဘက်ခေတ် စာရေးဆရာများတွင်လည်း မှန်ရာရေးချင်သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လည်း သိတဲ့အတိုင်း ဘဲ။ ဆင်ဆာလွတ်အောင် ရေးနေရတာလေးဘဲကွာတယ်။ ကျွန်တော့်ကို အကိုကြီးကိုအေးချမ်းက ဒီလိုပြောဖူးတယ်။ “ညီလေးရေ အားလုံး က ဒီနိုင်ငံရေးစနစ်မှာဘဲ အဆုံးသတ် တာကွ”တဲ့။ ကိုသီဟကတော့ “ ကျွန်တော်တို့က စင်ကာပူလို ချမ်းဘဲချမ်းသာပြီး သတင်းမီဒီယာမလွတ်လပ် တာကိုမကြိုက်ဖူးဗျ။ ကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တာက အဘက်ဘက်က ဒီမိုကရေစီနည်းနည်းကျကျတိုးတက်တဲ့နိူင်ငံတနိူင်ငံ အဖြစ်နဲ့” တဲ့။ ဒါလည်းဟုတ်သည်ပင်။ အရင်က ကျွန်တော့်စိတ်မှာ စင်ကာပူလိုတိုးတက်ချမ်းသာ သောနိုင်ငံကို အလွန်အားကျမိသည်။ ကိုအေးချမ်း၊ ကိုသီဟတို့ နှင့်ပြောဆိုဆွေးနွေးပြီးနောက်ပိုင်း မှာတော့ ကျွန်တော့်အယူအဆနည်းနည်းပြောင်းသွားသည်။ ဒါတွေ ရေးရလျှင်ဆုံးမည်မဟုတ်။ အဓိက ကတော့ လွတ်လပ်တဲ့၊ တိုးတက်တဲ့တိုင်းပြည်၊ နိုင်ငံအကြောင်းပြောကြပြီဆိုရင် သတင်းမီဒီယာ အခန်းဟာ အလွန်အရေးပါတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ မှာ သိသိကြီးနဲ့ ခံနေရတာ ကိုရေးချင်တာပါ။ ဘာလို့ လဲ ဆိုတာကတော့ လူထုဦးစိန်ဝင်းရဲ့ ဆောင်းပါးကို ဖတ်မိသူဆိုရင်သိပါလိမ့်မည်။ နောက်ပြီးတော့ ၁၉၆၂ အာဏာသိမ်းပြီး နောက်ပိုင်း ကထဲက အစိုးရက ပေါက်တဲ့ မဖြစ်စလောက် ချီးလေးရှု ပြီး နိုင်ငံတော် ချီးဘူးအစိုးရက အနော်တို့ ကိုဘယ်ခေတ်နဲ့ မှမတူအောင်လွတ်လပ်စွာ ချီးရေးခွင့်ပေးနေပါတယ်လို့ အော်ပြီး ဖားနေ သာယာနေသူ တချူိ့ သောစာနယ်ဇင်းသမားအမည်ခံ အာလဝီမောင်ရွှီး တွေ သိပ်ကြည့်စေချင်တာပါဘဲ။ ဆိုတော့ ပေါ့ပ်ဆောင်းပါး တွေရေး ပြီး တကယ့်စာနယ်ဇင်းသမားကြီးလိုလို ဘာလိုလို နဲ့ လူတွင်ကျယ်လုပ်ပြီး အစိုးရဘက်ကနေ ဝါဒဖြန့် သူတွေ သတိသာထားပေတော့။ လောလောဆယ်တော့ ရွာထားစမ်းပါ ဗျောင်လိမ်ဆရာသမားတွေရေ။ ဒါပေမယ့် အလှည့်ကျ မနွဲ့ စတမ်း ပေါ့ ။ ဟဲ ဟဲ။
သောင်းပြောင်းထွေလာ ရေးချင်ရာရာ (၃)
ဖြူဖြူစင်စင် ဗြဟ္မာစရိယ ဂိုဏ်းတွေနဲ့´
ဆရာကြီး သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းရဲ့ဝါဒ ပါပဲ။ အယူအဆ တူချင်တူ မတူချင် လဲ ဖြူဖြူစင်စင် ငြီမ်းငြီမ်းချမ်းချမ်း သဘောထား ကွဲလွဲ နိင်ပါတယ် တဲ့။ အဆင့်အတန်း အင်မတန်မြင့်ပြီး ဒီမိုကရေစီ ဆန်လှတဲ့ သဘောထား ဖြစ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓ ရဲ့ ဧဟိပတ်သိကော ဆို တဲ့ ဓမ္မဂုဏ်တော် နဲ့ လဲကိုက်ညီတဲ့ အယူအဆ ပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည် မှာ ရာဇတောဝါတွေ ဒီဝါဒ ကို လက်တွေ့ကျင့်သုံး နိင် ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမိပါတယ်။
posted by Kyal Sin
1 comments |	Wednesday, September 20, 2006
NOW'S THE TIME TO JOIN TOGETHER
AND LOOK TOWARD HEAVEN
"New Year Notes"
A professor of geography in Kyoto explained to me in poetic terms his emotions asachild growing up in Japan at the end of the war. He describedaday when an American soldier had appeared at his village in search of antiques. He had looked up to the tall stranger and was filled withastrong awareness of the fact that he, the little Japanese boy, was ill-nourished and puny and ill-clothed, while the big American soldier was well-dressed and obviously well-fed. He recognized the world of difference between the strong and the weak. But, the professor told me, all through his childhood, as he and his family struggled for daily survival, he would always look up toward the heavens and he knew that behind the clouds was the sun.
When he wasagrown man and Japan had become an economically powerful country, he went onafield trip to an Indian village. And one day as he stood speaking to some Indian villagers he became suddenly aware that he was well-fed and well-clothed while the villagers were malnourished and poorly clothed. He and his countrymen were now cast in the role of the strong. But, he said to me withasmile, our young people these days, although they are rich and have never known what it was like not to have enough to eat, they do not look up toward the heavens, they do not care whether there are clouds or whether there isasun behind them. I do not know how may Japanese people would share the views of this gentle professor of geography. But I think many people in Burma will recognize the instinct that makes us look up toward the heavens and the confident inner voice that tells us that behind the deeply banked clouds there is still the sun waiting to shed its light and warmth at the given hour. The beginning ofanew year isatime when we all like to turn our faces towards the heavens, when we look to our friends all over the world to join us in our quest for light and warmth.
'Cause they all I ever had
Redemption Song, Redemption Song
ကျွန်တော့်ကို အားသစ်တွေ၊ ယုံကြည်ချက်တွေမွေးပေးနိုင်တဲ့ သီချင်းမို့ လို့ ပါ။ကျွန်တော်တို့
လူငယ်တွေလည်း တတ်နိုင်တဲ့ ဘက်ကနေပါဝင် ကြစို့ ရဲ့ ။ အဘ ဦးဝင်းခက်ကတော့ပြောသွားတယ်။ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးဆိုတာ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ လက်နက်နဲ့ တော်လှန်တာတဲ့။ ပညာရှိသူက ပညာလက်နက်နဲ့ဥစ္စာရှိသူက ဥစ္စာလက်နက်နဲ့အဖက်ဖက်ကနေ အင်တိုက်အားတိုက် ပါဝင်တော်လှန်ရမယ်တဲ့။ အဓိက ကတော်လှန်ဖို့ ဘဲ။ ဆန့် ကျင်ဖို့ ဘဲ။ သူတို့ ကိုအားမပေးဘူး ဆိုရင် အဲ့ဒါတော်လှန်တာဘဲတဲ့။ဟုတ်တယ်။ အာဏာရှင်စစ်အစိုးရကို အားမပေး ဘူးဆို တာနဲ့ ကျွန်တော်
တို့ ဟာ အခြေခံအကြဆုံး တော်လှန်ပြီးသားဘဲ ။ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့အားတွေကို တိုင်းပြည်အတွက် အသက်။ ဘဝ ပဓါနမထားဘဲ တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ သူတွေကိုပေးရမယ် ။ အာဏာရှင် လူတစ်စု့ကြောင့် ညစ်နွမ်းနေရတဲ့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသမိုင်း ကို ပြန်လည်အဖတ်ဆည်ဖို့  လုပ်ကြတဲ့ ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားမှုကြီးမှာ ကိုိုယ်တတ်နိုင်သလောက် ပါဝင်ကူညီ ဖြည့်ဆည်းပေးနိူ်င်တာဟာ အလွန်ဘဲဂုဏ်ယူဖို့ကောင်းပါတယ်။ နောင်တချိန် ကျွန်တော်တို့ သားမြေးတွေက ကျွန်တော်တို့ ကို ပြန် မေးလို့ ရှိရင်လဲ ကိုယ်ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့ တာကို မရှက်မကြောက် ပြန်ဖြေနိုင်မှာကို တွေးကြည့်ရင်တောင် ကြည်နူးဖို့တော်တော်ကောင်းပါတယ်။ အရေးတော်ပုံ မလွဲမုချ အောင်ရမယ်။
သောင်းပြောင်းထွေလာ ရေးချင်ရာရာ (၂)
5 comments |	Monday, September 18, 2006
ရန် ကုန် တက္ကသိုလ် ကို ရောင်း တော့မယ် ဆိုပါလား။ ရန် ကုန် တက္ကသိုလ် ရဲ့ကြီး မြတ် တဲ့ ဂုဏ် သိက္ခာ နဲ့ခန်း နား ခဲ့တဲ့သမိုင်း ကြောင်း တွေ ဟာ ငို့ ဘ လောဘ ရယ် မ နာ လို စိတ် တွေ ရယ် ကြား မှာ တန် ဆာခံ ဖြစ် ရ တော့မယ်။ ဒီ တက္ကသိုလ်ကြီး ထဲ မှာ ကို အောင်ဆန်း ၊ ကို နု ၊ ကို သိန်း ဖေ ၊ ကို ကျော် ငြီမ်း တို့ လို နိင် ငံ ရေး ကျောင်း သား တွေ လွပ် လပ် စွာ သ ဘော ထား ကွဲ လွဲ ခဲ့ကြ တယ် ။ ဒီ တက္ကသိုလ်ကြီး ထဲ မှာ ဦး ဖေမောင်တင် ၊ သိပ္ပံ မောင်ဝ ၊ ဇော် ဂျီ ၊ မင်း သုဝဏ် တို့က့ ခေတ်စမ်း စာပေ ကို စ ခဲ့ ကြ တယ်။ ဒီ တက္ကသိုလ်ကြီး မှာ Professor လုစ် တို့ဒေါက်တာ သန်းထွန်း တို့ ပု ဂံ ရာဇ၀င် ကို ငြင်း ခဲ့ ကြ တယ်။ ဒီ တက္ကသိုလ်ကြီး မှာ တိုင်း ပြည် ရဲ့အ နာဂတ် တွေ ကို ဆွေး နွေး ခဲ့ ကြ တယ်။ ခု တော့သွား ပြီ ပေါ့ ။ ၀ယ် မှာ ကလဲ Singapore က Poly တခု။ တက္ကသိုလ် ဆို တာ ဘာလဲ ရော သိ ကြ ရဲ့ လား။တောက် ပြင်းပြင်း ခေါက် မိ တယ် ။ အင်း ဒါ တွေ စဉ်း စား ရတာ အကုသိုလ် များ တယ်။ ဘုရား ပဲ ရှိ ခိုး တော့မယ်။ ပြီး ရင် တောင်း နေ ကြ ဆု တောင်း လိုက် ဦး မယ်။
“ အရှင် ဘုရား နောင် ဘ၀ ကြ ဒီ လို အတင်း ချောက် ထဲ က ကယ် တင် မယ့်သူ တွေ နဲ့ဝေး ရ ပါ လို ၏ ဘုရား။ ခု တော့သမိုင်း အမွေ အနှစ် မကျန် အား လုံး ကုန် ပါ ပြီ ဘုရား။ “
at 1:31 AM Permalink
3 comments |	Saturday, September 16, 2006
ဒီခေါင်းစဉ်လေးက သတင်းစာဆရာ၊ စာရေးဆရာကြီး ဆရာလူထုဦးလှရဲ့ခေါင်းစဉ်ပါ။ ကျွန်တော်လဲ ရောက်တတ်ရာရာ ရေးချင်ရာရာရေးပြီး ဘာခေါင်းစဉ်တပ်ရမလဲ မသိတာနဲ့ဆရာကြီးရဲ့ ခေါင်းစဉ်ကိုပဲ ခပ်တည်တည် ကူးချလိုက်တာပါ။ နောက်လဲ ဘာပဲရေးချင်တာ ရှိရှိ နောက်မှာ အမှတ်စဉ်ထိုးပြီး ရေးသွားယုံပဲ။ (ပိုင်တယ်နော်။) တလောက ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ မူလတန်းက ဆရာမ ၂ ယောက်ရယ် နဲ့ကျွန်တော်တို့ တပည့်တစုရယ် ဆုံမိကြတယ်။ တပည့်တို့ ရဲ့ အစဉ်အလာအတိုင်း ဆရာမ ချက်ကျွေးတဲ့ ခေါက်ဆွဲကို အဝတုတ်ရင်းပေါ့။
အင်းဆရာမတွေလဲသူတို့ရဲ့တပည့်တွေကို ကြည့်ရင်း ပီတိဖြစ်နေပုံပါပဲ။ ငယ်ငယ်တုန်းက ဘာကောင်တွေ ဖြစ်လာမယ်မှန်း မသိတဲ့ကောင်တွေ ခုတော့တော်သေးတာပေါ့ လို့တွေးနေပုံပါပဲ။ ဆရာမတွေ နဲ့တွေ့ တော့ ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ် က ကျောင်းလေးကို လွမ်းလာတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကျောင်းလေးက တကယ်တော့ ကျောင်းပီပီသသ ပုံစံဆောက်ထားတဲ့ ကျောင်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ရှေးခေတ် အင်္ဂလိပ်ပုံစံ အိမ်ကြီးရဲ့ အောက်ထပ်ကို ကျောင်းလုပ်ထားတာပါ။ အိမ်ကြီးက အတော်ကြီးတာမို့သူငယ်တန်းက လေးတန်းထိကို ချောင်ချောင်ချိချိပါပဲ။ လူလေးတွေကလဲ ပေါက်စနလေးတွေကို။ ( ငယ်ငယ်ကတော့ ဘာမဆိုအကြီးကြီးလို့့ ထင်ရတာပဲ ။ ဘုရားပေါ်ရောက်လဲ ရင်ပြင်ကြီးက အကြီးကြီး ပြေးလို ဆော့လို့အလွန်ကောင်းပေါ့။ မုန့်စားရင်လဲ အကြီးကြီး အများကြီးလိုပဲ။ ခုတော့ကုန်ဈေးနုန်း နဲ့ စရိတ်စက က ပဲကြီးတာ ရှိတော့တယ် ထင်တယ်။)
ကျွန်တော် တို့ကျောင်း ရဲ့ ဘယ်ဖက်ဘေးမှာ က ကားဝပ်ရှော့ တခုရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ က ၀ပ်ရှော့ရှေ့က ဘော်ဒီခွံပဲရှိတဲ့ ကားပေါ် တက်ဆော့ရတာ အပျော်ဆုံးပေါ့။ နောက်ဆော့နည်းတခုက ကျောင်းဆင်ဝင် လှေကားက ခုန်ချုပြိုင်ကြတာ။ (အခုန်ကောင်းလို့ခေါင်းကွဲ ပြီးဆေးခန်းလဲ ရောက်ဖူးပါတယ်။ ၃ တန်းတုန်းက မှတ်မှတ်ရရပါပဲ။) ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းရှေ့့က အင်းယားကန်ပေါ့။ ဒိုက်တွေပဲသေချာ မြင်ရပါတယ်။ အဲဒီ ဖက်ခြေဦးလှည့်ရင် ကတော့ ကြိမ်လုံးနဲ့မိတ်ဆွေ ဖြစ်မယ် ဆိုတာက ကျောင်းသားတိုင်း နားလည်ထား ကြပါတယ်။
ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်မှတ်ရရ အဖြစ်ဆုံးကတော့ ၄ တန်းမှာပါ။ ၈၈ မှာ ကျွန်တော် ၄ တန်းတက် ရပါတယ်။ ဒီတော့ ထုံးစံ အတိုင်း ၄ တန်းကို ၂ ကျော့ ပြန်တက်ရပါတယ်။ နောက်တခါ ၄ တန်းကို ပြန်တက်ရော ကျွန်တော်တို့မူလတန်းကျောင်းလေးက တော်တော် အဆင့်မြင့် သွားရောဗျ။ ကျောင်းတက်တာတောင် အစောင့်အရှောက်နဲ့ကမ္လာပေါ်မှာ ဘယ် မူလတန်းကျောင်းမှာ မှ ဘယ်လောက် အရေးပါတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ သားသမီး တက်တက် ဒီလောက် အစောင့်အရှောက် တူမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သိကြရဲ့လား ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ မူလတန်းကျောင်းလေးက “အ.မ.က (၂) ဗဟန်း” တဲ့ဗျာ။ ခုတော့ ကျောင်းက တခြား မူလတန်းကျောင်း နေရာမှာ ခွေးဝင်စား သွားလုပ်နေပြီတဲ့ဗျာ။ အင်း ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်ကတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ လက်နက်ကိုင် အစောင့်အကျပ် အထူထပ်ဆုံး မူလတန်းကျောင်း က ကျောင်းသား ဖြစ်ခဲ့ရလို့ဂုဏ်ယူရပါတယ်ဗျာ။ အစောင့်အရှောက်နဲ့ကျောင်းတက်ရတာ နည်းတဲ့ ကုသိုလ်လားလို့ ။
This is Thura who lives in little village is called Thapaygone but our village has 24 hours electricity, water and even internet. Sound like ex-capital of Burma, Yangon. Huh ..may be better than Yangon.. :) if you don’t know where is my village, you can use GoogleEarth to find my village. You will seeasmall white pagoda and monastery next to the pagoda in North West of the village. It is where Sayardaw and some other monks live. It is used to be my school as well. You will obviously see one little river is running thought in the middle of the village. It divides the village into East and West. I live in east part of village which closes to the forest. I got to tell you one important thing which is I have three dogs. They are called as Ng Shwe,Net Aye and Golden Mann. Ng Shwe looksalittle fat, lazy and barely moves asabully dog. But Net Aye looksabit skinny but swift. Golden Mann sounds British..right? Actually, I thought of giving some Russian name when i got him..but Sayardaw only taught some English words to us..So, i decided to name as Golden Mann.. Anyway he is the youngest and strongest among these three dogs..They guard my hut pretty well. If you needadog, please let me know. I have thought of giving away Golden Mann. He guards better than Ng Shwe and Net Aye because of his youth and strength. Since sky rocketing price is going high, I am not rich enough to feed that three dogs. Golden Man eats twice of the amount of other two. Therefore, I have decided to give away Golden Mann. I have introduced you about myself, my village, my pets and how rich I am. Well, I haveareason to join this blog which is since there are apparently only six monkeys in this blog… I have forced to fill in as 7th monkey to becomeameaningful 7monkeys blog. I am super glad of it.. many thanks Ko Thiha
Security Council Puts Myanmar on Agenda
U.N. Security Council puts Myanmar on agenda as U.S. moves to increase pressure on junta
UNITED NATIONS, Sep. 16, 2006
(AP) Over strong opposition from China, the U.N. Security Council on Friday put Myanmar on its agenda in what U.S. officials calleda"major step forward" in American efforts to increase pressure on the country's military dictatorship.
The council voted 10-4 to formally list Myanmar, which has drawn international condemnation for imprisoning hundreds of political opponents, including pro-democracy leader Aung San Suu Kyi.
China led Russia, Qatar and Congo in opposing the move, saying Myanmar has made strides in solving its problems and doesn't poseathreat to international security _ the requirement for council consideration.
at 5:59 AM Permalink
ခက်လည်းခက်တယ်။ အဲဒီလိုလူတွေနဲ့ ။
ကြည့်လို့နားထောင်လို့ မဝ
ရင်မှာနင့်ရ ဆို့ ရ။
ဖွင့်ဟ ခဲ့လို့ တဲ့။
အန်တီစု ၊ အမေစု ကျန်းမာပါစေ။ ချစ်တဲ့သူတွေနဲ့အမြန်ဆုံးပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ ရပါစေ။
from bastard magazine.
cyberpunk(cyber culture, science-fiction)
(download with torrent)
But i have no time to read coz of Lazy,sleeping,eating,chatting,shitting. :-)
I know this song since it came out. But I listen it carefully today.Then I accept this isapretty good song and I like it so much.
NayPyiDaw vs PyinMaNar
3 comments |	Tuesday, September 12, 2006
at 7:22 PM Permalink
2 comments |	Monday, September 11, 2006
here's detail on each.
From Boing Boing Reporter Xeni Jardin
Ethnic Look, originally uploaded by Parc Cruz.
Drunken Staircase, originally uploaded by A Glimpse of the World.
ဘာမှလုပ်ချင်ကိုင်ချင်စိတ်မရှိတာနဲ့ BoingBoing Feedကပို့တဲ့ Chinglish
အကြောင်းရေးထားတဲ့စာကိုဖတ် မိတယ်။ စိတ်ထဲမှာဘာများလည်းပေါ့ ။အဲဒီကတဆင့် Flickr မှာ ဓါတ်ပုံတွေ လျှောက်ကြည့် ရင်း နဲ့ဒီပုံလေး ကို တွေ့ တာဗျ။ တော်တော်လေးကြိုက်မိတယ်။ စိတ်ထဲမှာလည်း ငါလည်း အဲလို ရိုက်ကြည့် ချင်လိုက်တာ ဆိုတာမျိူး လည်း ပေါ်တယ်။ ဟဲ ဟဲ။ ဒါပေမယ့် ဓါတ်ပုံ တို့ ၊ ပန်းချီတို့ နဲ့ပတ်သတ်ပြီးတော့ နကန်းတလုံးတောင် မသိတော့ ခတ်သားလား။ အဲဒီတော့လည်း ခံစားရုံပေါ့လေ။ဟုတ်ဖူးလား….
at 2:12 AM Permalink
0 comments |	Saturday, September 09, 2006
First,thanks to Mg Yoe. I got radio.blog info from his blog.
So i can blog my favorite songs from here.yayyyyyy....
Although I'm not Beatles's big fun but "I am the warlus" is one of my favorite of them.You can find their fun debating about this song meaning in there....
I think song meaning is depend on the people.
I don't want to participate of lyrics.Have Fun!
GOO GOO GOOOOOOOOOOOJOOOOOB.
5 comments |	Friday, September 08, 2006
နည်းနည်းလေးတောင် တွန့် ဆုတ်မနေဘူး
ခပ်မူးမူး ထွေထွေနဲ့ 
အိုး….တရေးနိုးလို့ ကြည့် လိုက်တော့
ဖွဖွလေး တေးဆိုပြလို့ 
ဒါနဲ့ငါသူတို့ ကို
ရောင်စုံရောင်ဝါ အမျိူးမျိူးနဲ့ 
လင်းလို့ တောက်လို့ 
ဒါနဲ့ငါသူတို့ ကိုလည်း
ပုခတ်ထဲက မွေးကင်းစကလေးတွေနဲ့ 
at 12:42 AM Permalink
Spirit for Survival & Burma behind bars(Dvd ripped)
1 comments |	Thursday, September 07, 2006
New Band From Kyat Pyaye
Big Craps is new band from Kyat Pyaye.They released "Suck Pistols Dumb Crookers" new album.After listening their songs , i'm so sorry for Lay Phyu's "The Moments" album.They can be top of the Billboard Top 200 albums becauese front-man Than Shwe's shitty crappy voice is unbelievable fantastic! 100% MONEY BACK GARANTEE.
Get Democracy Internet TV Player
at 10:59 PM Permalink
A ridiculous documentary. Every Burmese must go to there and make comments
at 7:20 AM Permalink
1 comments |	Monday, September 04, 2006
This article is about the not so well-known thing between Moethee Zun and Min Ko Naing written by Moethee Zun. I found this out by googling about Min Ko Naing.
The most important thing about Min Ko Naing is his morals and courage. I have always admired his courage. When we were very young, Min Ko Naing’s parents did not like him to hang out with me. They worried that I would "destroy" him. My parents thought the same thing of him. So we could not meet in front of our parents. But we always managed to meet each other.
We had our own signal. Min Ko Naing would makeacross with charcoal at an electricity pole, which is sitting in front of his house. That meant he was not at home. If he was there, he would just makeacheck mark. Then I knew he was there, and I would wait nearby. When he saw me, he would come out and we would meet. We used this signal until the 1988 democracy uprisings.
Our parents should have been worried. When we were young, I showed him how to smoke, and in return, he taught me how to swim. As we got older, we began to read more books and learn more about politics. Later we started having serious and critical discussions on the political situation and that made our parents really worry. Once my father angrily said, "Do you think our house isarebel headquarters?" At that time, we were holding informal meetings and discussions on politics.
Now my friend is servinga20 year sentence in prison, and I have also givenadeath sentence in absentia. Min Ko Naing does not work for himself, but for the people, which is why he isareal hero. I think of my friend more and more whenever I see those who are power hungry and cowards holding titles and are in high positions. But I’m sure that his spirit is still strong, and he will continue to stand up against the military dictatorship in Burma. But I’m worried about his health condition. But heroes never die.
1 comments |	Sunday, September 03, 2006
ဒီနောက်ဆက်တွဲကတော့ ကျဆုံးသွားတဲ့ သူရဲကောင်းတွေကို ကျန်ရစ်သူတွေက သူတို့ရေးတဲ့ ဒိုင်ယာရီမှတ်တမ်း
ထဲကနေကောက်နှုတ်ပြီးသူတုိ့ခေါင်းချတဲ့မြေကြီးရဲ့ခေါင်းရင်းမှာမှတ်တမ်းရေးကမ္ပည်းတင်တာကို ရင်နာနာဂုဏ်ယူစွာနဲ့ ပြန်လည်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဦးဆုံး ကျတဲ့ အာဇာနည်ဖြစ်ပါတယ်။
ဆံခြည်တမျှင်တောင်မှ နောက်မဆုတ်နဲ့ ။
အငုတ်အမြစ်ပါ မကျန်အောင် ထိုးရသလို
စာအုပ်ထဲမှာတော့ မဖော်ပြထားပါ။ ကျန်ခဲ့သည်လို့ ထင်ပါသည်။
အောင်ပွဲရတဲ့ အချိန်မှာဘဲ အားပြတ်ကျဆုံးတဲ့ နောက်ဆုံး အာဇာနည်
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လေထီးတပ်သားလို သဘောထားပြီး
ကျဆုံးသွားသူတွေရောကျန်ခဲ့တဲ့ သူတွေထဲမှာပါ လူတန်းစားအသီးသီး အတွေးအခေါ်
အယူအဆအမျိူးမျိူးပါတာပေါ့။ဒါပေမယ့် တူတဲ့တစ်ချက်က အားလုံးအဲဒီအချိန်မှာ
နိုင်ငံရေးမီးရှုးမီးပန်းဖောက်မနေဘဲ တညီတညာထဲ နောက်မဆုတ်တမ်းတိုက်ခဲ့တာဘဲ။
ဗမာ့လွတ်လပ်ရေး သမိုင်းကိုပြန်ကြည့်ရင်လည်း အဲဒီလို ညီညွတ်ခဲ့လို့ကိုယ့်ထက်အားကြီးသူတွေကို
ဖြိုချနိုင်ခဲ့တာကိုတွေ့ ရမှာဖြစ်တယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ ခေတ်မှာလည်း ရှေ့ကခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ 
အရှေ့ ကနေဝန်းထွက်သည့်ပမာ ကျွန်တော်တို့ ခေတ်ရောက်ရမည်မှာမလွဲပါ။
မှတ်ချက်၊ ။ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်လွတ်လပ်စွာဟောပြောလုပ်ဆောင်ခွင့်ရတဲ့အချိန်ရောက်ရင်
ကျဆုံးခဲ့ သူတွေရော ကျန်ရစ်ခဲ့သူတွေကိုပါဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ အဲဒီ၅၃ရက်ဖြစ်ရပ်မှန်တိုက်ပွဲကို ရုပ်ရှင်ရိုက်ပြီး
နောင်လာနောက်သားတွေအတွက် ဒါဗမာကွ လို့ ကမ္ဘာမှာ ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားနိုင်အောင်
မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်အဖြစ်တင်ချင်ပါတယ်။ ခင်ဗျားလည်း ကျွန်တော်နဲ့ ဒီနေရာမှာ တစ်သဘောထဲ လို့ 
ဒီတိုက်ပွဲအကြောင်းကို ရေးတဲ့သူက မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရတနာတစ်ပါးဖြစ်တဲ့ လူထုဒေါ်အမာ ရဲ့ သား
ရဲဘော်ဖိုးသံချောင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူကိုယ်တိုင်ပါဝင် ဆင်နွှဲခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲ အကြောင်းကို ကျောင်းသားထောင်တော်လှန်ရေးသမား ဆိုတဲ့ စာအုပ်မှာရေးသားဖော်ပြထားတာပါ။
အဲဒီတုန်းက နေဝင်း မဆလ အစိုးရက နိုင်ငံရေးသမားတွေကို ကိုကိုးကျွန်း ပို့ ဖို့ စီမံကိန်းဆွဲနေတာဗျ။
အဲ …ပထမနဲ့ နောက်ဆုံး အသုတ်ဖြစ်တဲ့ အဲဒီအသုတ် မှာ မြန်မာပြည်ရဲ့  ဒိတ်ဒိတ်ကြဲဆရာကြီးများဖြစ်တဲ့
ဆရာကြီး ဗန်းမော်တင်အောင် ၊ ဆရာကြီးမြသန်းတင့် ၊ ဆရာကြီး လူထုဦးစိန်ဝင်း တို့ လဲပါတာပေါ့။
စကားမစပ် ဆရာကြီးမြသန်းတင့်ဟာ သူ့ရဲ့ မာစတာပိစ် ကိုယ်တိုင်ရေး လုံးချင်းဝတ္ထု ဖြစ်တဲ့
ဒီတော့ကာ မဆလအစိုးရကိုအနိုင်ယူခဲ့တဲ့ “၅၃ရက်တိုက်ပွဲ” အကြောင်းကို ရဲဘော်ဖိုးသံချောင်း
ဒုတိယတချက်က….ပြည်မထောင် အခွင့်အရေးတွေ ကျနော်တို့ ဆီမှာလည်းရရှိရေး။ဒါကို ကျနော် နည်းနည်းထပ်ပြီး ရှင်းပြမယ်။ ကိုယ်ထူကိုယ်ထစနစ်ဆိုတာ နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုထင်းခွေ၊ ရေခပ် ။ တောင်ယာစိုက်၊ ထမင်းချက်အလုပ်တွေ လုပ်ခိုင်းတယ်။ဒါဟာ ဗမာပြည်ထောင်သမိုင်းမှာ ဘယ်တုန်းကမှ မရှိဖူးတဲ့ ဖိနှိပ်ရေးစနစ်တခုဖြစ်တယ်။ ဒီအလုပ်တွေလုပ်ပေးဖို့ထောင်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ဝန်ထမ်းရှာတာ(ဒါမှမဟုတ်) နောက်ထပ် သာမာန်ရာဇဝတ်သားအကျဉ်းသားတွေခေါ်လာတာ စတဲ့စရိတ်တွေကို ကာမိအောင် ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး။သူတို့အဲဒီငွေအကုန်မခံနိုင်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုယ့်ဟာကိုယ်အလုပ်လုပ်ခိုင်းနေတာ မဟုတ်ဘူး။ အဓိကဟာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို နံနှိမ်တာ။နိုင်ငံရေးဂုဏ်သိက္ခာကို ချပစ်တာ။ စော်ကားတာ။ အဲဒါအပြင် နောက်ထပ် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ ထပ်ခေါ်လာပြီးတော့ ဒီကျွန်းပေါ်မှာ တသက်လုံးပို့ ထားဖို့ ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်နဲ့အကုန်လုံးက ဆက်နေတဲ့ဟာတွေ။ ဒါကြောင့်မို့ လို့ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ဖျက်သိမ်းပေးရေးဆိုတာဟာ ဒီထောင်ရဲ့  အခရာအကျဆုံးပေါ်လစီကို တိုက်တာဖြစ်တယ်။
နောက်တခုကပြည်မထောင်အခွင့်အရေးရရှိရေး၊ဆိုလိုတာကကျနော်တို့ဒီမှာကဆက်သွယ်ရေးခက်တယ်။မိုးတွင်းဆိုလို့ရှိရင်သင်္ဘောသွားလို့လာလို့မရဘူး၊အစရှိတဲ့အကြောင်းပြချက်အမျိူးမျိူးနဲ့ချူပ်ချယ်မှုတွေအမျိူးမျိူးခံနေရတာ။ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့တောင်းတဲ့ဟာက ရိက္ခာကအစ၊ ထောင်ဝန်ထမ်းအပါအဝင်၊ အိမ်ကပစ္စည်းပို့ တာအဆုံး တခြားပုံမှန်ထောင်တွေမှာရခွင့်ရှိတဲ့အခွင့်အရေးအားလုံးရရှိရေး။ဒါကဖြစ်နိုင်ရင်ကြိုက်သလောက်ချဲ့ရတယ်ဗျာ။……..အဲဒီတော့ဒါကလဲသိပ်ကို အခရာကျတာ။
ထောင်အာဏာပိုင်တွေအဖို့ က ငွေရေးကြေးရေး ၊ အချိန်၊ လုပ်အား အဲဒီဘက် ကကြည့် လိုက်လို့
ရှိရင် ပြည်မထောင်တွေအတိုင်း အခွင့်အရေးတွေပေးဖို့ ဆိုတာ လုံးလုံးကို မဖြစ်နိုင်ဘူး။ အဲဒီတော့ အဲလိုလိုက်လျောလိုက်လို့ ရှိရင် အစစအရာရာ ကျနော်တို့ ကို အလျှော့ပေးရပြီ။ သူတို့ မှာသွားပြီ။ သူတို့ 
ဦးကျိူးပြီ။ သူတို့ ခေါင်းဖော်နိုင်စရာ မရှိတော့ဘူး။ နောင် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျနော်တို့ တောင်းသမျှ သူတို့့လိုက်
လျောရမယ့် အခြေအနေ ဖြစ်တော့မှာ။ အဲဒီတော့ ဒီဟာက အသည်းချင်းပေါက်ကြတယ်ဆိုတဲ့ တိုက်ပွဲမျိူး
ဒီတိုက်ပွဲဟာ စံပဲ၊ ဓာတုဗေဒ လစ်တမတ်စက္ကူနဲ့စမ်းသပ်သလိုပဲ၊ ဒီတိုက်ပွဲနဲ့စမ်းသပ်တာပဲ၊အဲဒီတော့ ထောင်ထဲမှာ အသေခံ၊ အစာငတ်ခံ တိုက်တယ်ဆိုတာ ထောင်တိုက်ပွဲထဲမှာ အမြင့်ဆုံးသဏ္ဍာန်ပဲ။ ဒါ တရားဥပဒေဘောင်ထဲက တိုက်တာ။ ထောင်တိုက်ပွဲတွေထဲမှာ တခြား အန္တရာယ်ရှိတဲ့ တိုက်ပွဲသဏ္ဍာန်တွေရှိတာပေါ့။ ဥပမာ….ထောင်တွင်းပုန်ကန်မှုလိုဟာမျိူးပေါ့လေ။ ဒါကကျတော့ တည်ဆဲဥပဒေနဲ့ဘယ်လိုမှလုပ်လို့ မရဘူး။ဒါပေမယ့် အင်မတန်မှ အန္တရာယ်ကြီးပါတယ်။ ဒါဟာအမျိူးမျိူးအဘက်ဘက်က စဉ်းစားတွေးဆပြီးတော့မှ ဆုံးဖြတ်ရတဲ့ ကိစ္စမျိူးဖြစ်ပါတယ်။ ဗမာပြည်မှာ အစာငတ်ခံတိုက်ပွဲဝင်တယ်ဆိုတာက အနောက်တိုင်းကဟာတွေနဲ့ မတူဘူး။ကျနော်တို့ ဘာဆိုဘာမှ မစားတာ။ ရေကလွဲပြီး ဘာမှ ဗိုက်ထဲကို မသွင်းဘူး။ ဆားတောင် ကျနော်တို့ မသွင်းဘူး။ အဲဒါကြောင့်မို့ကျနော်တို့ က အစာငတ်ခံတိုက်ပွဲ ဖော်ထုတ်မယ်ဆိုရင် အဘက်ဘက်ချင့်ချိန်ပြီးမှ ဆုံးဖြတ်တယ်။ တခြားတိုက်ပွဲသဏ္ဍာန်တွေ စမ်းကြည့် ၊ လုပ်လို့ မရတော့မှ ဒါနောက်ဆုံးအနေနဲ့ သုံးတာဖြစ်တယ်။စပြီဆိုရင်လည်းနောက်ဆုတ်လို့ မရဘူး။
ဆိုတော့ ၁၉၇၁ ခုနှစ် ၊ ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့ကစပြီး ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်နေ့ မှာ အဆုံးသတ်ခဲ့တဲ့ ၅၃ရက်တိုက်ပွဲ
ကြီးမှာ လူတန်းစားအသီးသီးကကျားကောင်းဇာနည် ၈ဦးတိတိ အသက်ပေးလှူခဲ့ ကြတယ်။ အလုပ်သမား၊
လယ်သမား။ကျောင်းသား။အနုပညာရှင်အစသဖြင့်ပေါ့။သူတို့အားလုံးညီညီညွတ်ညွတ် နောက်မဆုတ်တမ်း တိုက်ခဲ့ကျတဲ့ အတွက် အာဏာပိုင်တွေရဲ့  ယုတ်မာကောက်ကျစ်တဲ့ အကြံအစည်ဟာ
ပြိုလဲပျက်စီးအရှုံးပေးခဲ့ရတယ်။အဲဒီကစလို့နောက်နောင်ဘယ်နိုင်ငံရေးသမားမှကျွန်းပို့ ခြင်းခံရတာမျိူးမရှိတော့ပါ။ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေလည်း အဲဒီလိုညီညွတ်မယ်ဆိုရင် အောင်ပွဲဟာ
လုံးဝခေါင်းငုံ့ မခံတော့ဘူး။ခင်ဗျားကို လည်းဟိုဟာလုပ်ပါ ဒါလုပ်ပါလို့ တိုက်တွန်းနေတာမဟုတ်ပါဘူး။
တခုဘဲတောင်းဆိုချင်တာက ခင်ဗျားဘက်ကသဲတစ်ပွင့်လောက်ပါဘဲ။ ကျွန်တော်တို့ သာမာန်ပြည်သူတွေ
အစစအရာရာမှာ နိမ့်ကျပြီး လူဖြစ်ရှုံးနေပြီဗျ။ လူဖြစ်ရှုံးနေပြီ။